Bixitaanka Ronaldo Ee Real Madrid, Dhibta Uu Ku Bilowday Lopetegui & Rivaldo Oo Ka Hadlay Saameynta Dhaawaca Lionel Messi - Jubbaland TV
By admin October 23, 2018 194
Weeraryahankii hore Barcelona Rivaldo ayaa aaminsan iney wax cad tahay Real Madrid ineysan heli karin badalka Cristiano Ronaldo, sidoo kalana wuxuu dareemayaa in maqnaashiyaha Lionel Messi ee El-Clasico ay tahay wax hoos u dhac ah.
Real Madrid waxey Axadda safar u aadi doontaa magaalada Barcelona si ay kulanka El-Clasico ugu soo ciyaarto garoonka Camp Nou, wuxuuna kulankaan kusoo aaday xilli ay dhibaato dhexda kaga jiraan, maadaama ay ku wareereen macalinka cusub iyo sidoo kale maqnaashiyaha Zinedine Zidane iyo Cristiano Ronaldo.
“Ronaldo waa ciyaariyahan sare, kaliya maahan goolashiisa inuu la baxay, sidoo kale shaqsiyadiisa ayaa aheyd mid neceb guuldarada” ayuu yiri Rivaldo.
“Wuxuu caawin weyn u ahaa saaxiibadiisa kooxda, kaliya ma aheyn dhanka goolasha, balse shaqsi ahaan aad ayuu u necbaa guuldarada, wuxuu caawinaad weyn u ahaa saaxiibadiisa inta uu garoonka ku jiro, sida cadna qofna ma badali karo”
Dhanka kale Rivaldo wuxuu dareensan yahay in Julen Lopetegui uu cadaadis kala kulmay natiijooyinka aan wanaagsaneyn ee kooxda iyo inuu waayay gooldhaliye wanaagsan.
“Ma garan karo hadii ay tahay waqtiga saxda ah ee la badalayo, balse runta waxey tahay in natiijooyinka ay cadaadiska kusii badinayaan”
“Waxaan rajeyneynaa in Lopetegui uu xaaldaan ka baxo, wuxuu Spain uga tagay inuu fursadaan Madrid ka faa’ideysto, balse nasiibka ma siinin waqtiga saxda ah iyadoo kooxda ay lumisay xiddigii ugu fiicnaa xagaaga taasna waxey u muuqataa furaha ka dambeeya bandhigga xun ee hadda”
Ugu dambeyntii Rivaldo wuxuu ka hadlay in Lionel Messi uu seegayo kulanka El Clasico kadib dhaawacii gacanta kasoo gaaray sabtidii.
“Barcelona wey tabi doontaa Messi, waa xiddig cajiib ah, wuxuuna sameeyay bilow fiican fasalkaan isagoo kala duwanaasho abuuray sidoo kalana masuuliyadda qaatay”
“Maqnaashiyah Messi waxey fursad u tahay ciyaartoyda kale ee horay u socodka ah iyagoo soo bandhigi kara waxa ay sameyn karaan kulamada waaweyn ee Real Madrid & Inter Milan. Coutinho iyo Luis Suarez ayeyna muhiim u yahiin kulamadaas”
Gennaro Gattuso oo ku dhawaaqay safkiisa iyo Xiddigaha Suso, Montolivo, Borini iyo,,
Ogow magacyada Liiska xidigaha ku guuleestay abaal marinta kubada dahabka ee koobka aduunka xili sandkan uu hantay Modrich
Juve oo ku dhawaaqday safkeeda, Benatia iyo Pjanic oo kusoo laabtay, Barzagli iyo Bernardeschi oo